#Handaraab!: Yaan Carrabkeenna La Inoo Raacin! – somalilandtoday.com
#Handaraab!: Yaan Carrabkeenna La Inoo Raacin!
Dalal badan oo Carabta ah ayaa waxay ahaayeen dhul lama degaan, saxarre ah, dadkoodii ku noolaa way ku samreen, iyagoo carrabkoodu qabatimay kalmaddo wanaagsan oo ay ka mid yihiin: Maansha Allah, Alxamdulilaah iyo hadallo wanaagsan oo Illaahay raaligelin iyo tawaadac u muujinaya. Dhulkoodii waynu aragnay sida uu isku bedelay, ha shaqaystaan oo tacab ha sameeyaan laakiin waxa Alle u qaaday hadalkoodii wanaagsanaa oo ilaa maanta waa kuwaa Illaahay mahadinaya, shiidaalka, beetroolka iyo nimcadda Alle ku galadayna waynu aragnaa.
U kaalay inaga Soomaali ahaan dhaqan uma lihin oo afkeenna kuma badna xamdi naqa Alle iyo odhaahda Maansha Allah, carrabkeenuna waxa uu qabatimaa canaan, cay iyo catow. Waa ta maanta keentay in Soomaali meel kasta oo ay joogto u dareemi laayihiin nimcada Alle ku galaday ee u aamini laayihiin dhulkooda, tamarta ay wax ku tabci lahaayeenna looga qariyay.
Soomaalilaand markaynu u nimaadno waxa maalmahan danbe odhaahdeedu afafka dad badan ku badatay kelmadda “Handaraab”. Waynu ognahay oo meel handaraabanni waa meel laga maqan yahay ama aan la joogin markaa oo lasii xidhay, miyaynaan ka baqanayn in qabatinka carrabkeenna ee kelmaddaas Alle inoo qaado oo handaraab rabaanniyi inagu dhaco. Waayo waynu is ognahay oo markaynu odhaahdaa isticmaalayno uma adeegsano in wixii xun ee aan wanaagsanayn la inaga handaraabo sida qaadka, laakiin waxaynu ula jeednaa in dalkii inagu handaraabmay oo aanay waxba kala socon, Subxaan! Illaahow carrabkayagu markuu wax aan haboonayn ku hadlayo hanoo qaadin.
Alle aynu wanaag ka rajayno odhaah yididiilo iyo xamdinaq tilmaamaysana Alle aynu ku qaabilno meel kasta iyo milay kasta.
Waad mahadsantihiin walaal waa iga waano un intanni.
Walaalkiin: Maxamed Fuaad Dhago-cadde